SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Bhaibheri rinoti unofanira kugara ‘wakagadzirira kuzvidzivirira kune munhu wose anokubvunza chikonzero chetariro iri mauri, asi uchiita izvozvo nounyoro noruremekedzo rukuru.’ (1 Petro 3:15) Saka funga nezvezvinhu izvi zviviri—zvauchataura uye matauriro auchazviita.
“Ndinofunga kuti zvakakosha chaizvo kuti usashora vamwe kana kuzviita mazivazvose, nokuti ukadaro hakuna munhu waunogona kubatsira.”—Elaine.
“Kana takabva kumhuka, sei tiine rudo nengoni? Unhu hwakadaro hunoita kuti ufunge nezvevamwe pane kungozvifunga. Hazvina musoro kuti nditi unhu ihwohwo hwakabva kumhuka.”—Brittany.
“Pandakaita kosi yebiology, ndakadzidza nezvemiviri yedu uye mashandiro anoita masero acho. Kunyange zvazvo kosi yacho yaitsigira kuti vanhu vakabva kumhuka, zvandakadzidza zvakaita kuti ndinyatsoona kuti pane mumwe munhu akatisika.”—Breanna.